CC Shakuur oo war ka soo saaray boorarkii maanta laga jeexjeexay fariina u diray taageerayaashiisa | Somsoon
Home ARAGTIDA CC Shakuur oo war ka soo saaray boorarkii maanta laga jeexjeexay fariina...
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah musharaxiinta sanadkan u tartameysa xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa war ka soo saaray boor uu ku dheganaa sawirkiisa oo maanta laga jeexjeexay, kaas oo uu ku soo bandhigaayey musharaxnimadiisa.
“Waxaan canbaareynayaa gabood falka ay Ciidanka Ilaalada Madaxtooyada ku fujiyeen boor ku dheganaa ka soo horjeedka xarunta Baarlamaanka, oo lagu soo bandhigay sawir muujinaya musharraxnimada xilka Mdaxweynimo ee aan sannadka 2021-ka u taaganahay” ayuu yiri.
“Ciidanka ayaa shirkaddii boorarka lahayd u sheegay in uu amar kaga yimid Madaxtooyada” ayuu qoraalkiisa ku yiri.
“Haddii uu musharrax Farmaajo xammili karin sawir xayeysiin ah, sidee buu tartan doorasho ugu adkaysan karayaa. Tani waxay cashar horu dhac ah u tahay waxa uu maagan yahay musharrax Madaxweyne Maxamad Farmaajo” ayuu yiri.
Article horeWar-saxaafadeed: DF oo dalab hor-dhigtay guddoonka cusub ee baarlamaanka HirShabeelle
Article socoda Xafiiska R/Wasaare Rooble oo war ka soo saaray shirkii Banbaxa ee Muqdisho ka dhacay